We.com.mm - မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေက တခြားသူတွေထက် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေက ပိုလှတယ်၊ ပိုချောတယ် လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိုထူးခြားတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့သူ အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေမှာလည်း မတူညီတဲ့ အလှတရားတွေ ရှိသလိုမျိုးပေါ့။ မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူ ရှိပါတယ်။
၁) မျက်မှန်အားကိုးနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံ ဖမ်းလို့ရတယ်
မျက်မှန်လေး ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ အထာကျတဲ့ပုံစံကနေ ခပ်တုံးတုံးပုံစံကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြောင်းလဲပစ်လိုက်လို့ ရတယ်။ မျက်မှန် ကိုင်းပုံစံလေး ပြောင်းလိုက်ရုံ၊ မျက်မှန်အရောင်လေး ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို အသာလေး ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။
၂) မျက်လုံးပင့်ပြီးကြည့်တဲ့အခါ ပိုအထာကျတယ်
ရိုးရိုးသူ မျက်လုံး ပင့်ကြည့်တာနဲ့ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့သူ မျက်လုံးပင့်ကြည့်တာ ကွာပါတယ်။ ခေါင်းလေးငုံ့၊ မျက်မှန်ကို နှာခေါင်းထိပ်မှာ တင်ပြီး မျက်လုံးပင့်ကြည့်တာက ပိုအထာကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ မျက်မှန်အောက်က မျက်လုံးတောက်တောက်တွေဟာ ဘယ်လောက် ညှို့အားပြင်းလည်းဆိုတာ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပြသနိုင်တယ်လေ။
၃) ဘယ်တော့မှ ဒိတ်အောက်မသွားဘူး
ခေတ်အဆက်ဆက် မျက်မှန်ကိုင်းပုံစံတွေ၊ အရောင်တွေသာ ပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမယ်။ မျက်မှန်တပ်ခြင်းဟာ စတိုင်ကျတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးအရင်ခေတ်ကတည်းက စတိုင်ကျဖို့ရော၊ အလှရော မျက်မှန်တပ်ခဲ့ကြတာ ခုချိန်ထိလည်း မျက်မှန်ဆိုတာ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်နေတုန်းပဲ။
၄) မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေကို လူတွေက ပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ကြည့်ဖူးမှာပါ။ မင်းသမီးကို မင်းသားက “မင်းက မင်းရဲ့မျက်မှန်လေးနဲ့ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်” ဆိုပြီးပြောတာမျိုးပေါ့။ တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ပင်ကိုယ်ပုံစံလေးအတိုင်းကို ပိုသဘောကျကြတာပဲ။ မှန်ကြောင်လေးတွေကိုမှ ထူးပြီး စိတ်ဝင်စားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကလည်း ရှိတယ်လေ။ အဲဒါတွေကတော့ ….
၁. စာကြိုးစားတဲ့ စာကြမ်းပိုးပုံပေါက်တယ်
လူတိုင်းက စာတော်တဲ့သူဆို စိတ်ဝင်စားကြတာပဲလေ။ မျက်မှန်တပ်ထားတာက စာကြိုးစားတဲ့ပုံ၊ ထက်မြက်တဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။ တကယ် ဟုတ်တာမဟုတ်တာ နောက်ထား။ လောလောဆည်တော့ လူရှိန်တာပေါ့။
မှန်ကြောင်လေးတွေက အလိုလို အချေပုံပေါက်စေပါတယ်။ “နင့် တစ်ဘဝလုံး ငါ့အချစ်ကိုရဖို့ သေလောက်အောင် ကြိုးစားရင်တောင် မရစေရဘူး” ဆိုတဲ့ ချဉ်းကပ်ရမလွယ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း လူဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း ခက်ခဲတဲ့ပန်းကိုမှ ရအောင်ခူးချင်ကြတာ။
၃. မျက်မှန်နဲ့လည်း ကြည့်ကောင်းနေတုန်းပဲ
မျက်မှန်တပ်လိုက်ရင် မလှတော့ဘူးလို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မျက်မှန်တစ်လက်က လူတစ်ယောက်ရဲ့အလှတရားကို မဖုံးကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ မျက်မှန်ကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
မသိတဲ့သူတွေအများကြီး တန်းစီပြီး ရပ်ခိုင်းထားကြည့်။ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့သူကို အရင်ဆုံး သတိထားမိကြပါတယ်။ ဖရိုဖရဲ တွေ ဝတ်ထားရင်တောင် သင့်မျက်နှာမှာ ထင်းထင်းကြီးထွက်နေတဲ့ မျက်မှန်ကြောင့် အလွယ်တကူ သတိထားမိစေပါတယ်။
မျက်မှန်ဆိုတာလည်း မှန်ကြောင်လေးတွေအတွက်တော့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူများတွေ မကောင်းပြောလို့တော့ ဘယ်တော့မှ ချွတ်မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ မှန်ကြောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက်တွေကို ထုတ်သုံးလိုက်ပါ။
Ref; www.parhlo.com, www.livingly.com
မုန်လာဥနီဖျော်ရည်ကို ၈လဆက်တိုက် သောက်ပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မယုံနိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်